Global Voices teny Malagasy » Manambana Basy Ny Lohan’ny Haino Aman-jery i Torkia Amin’izao Fifidianana Efa Akaiky Izao · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Oktobra 2015 7:40 GMT 1	 · Mpanoratra Ahmet A. Sabancı Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Tiorkia, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Tao anatin'ny herinandro tamin'ity volana Oktobra ity, niharan'ny daroka i Ahmet Hakan sy Serhat Yüce, samy mpanao gazety ka niteraka tabataba noho ny tsy fisian'ny fiarovana ny mpanao gazety ao amin'ny firenena izany. Ny fanafihana an'i Hakan  nataona andian-jiolahimboto mpikambana ao amin'ny antokon'ny fitondrana Torkia no tena malaza indrindra teo amin'ireo mpiserasera ao amin'ny media sosialy. Marobe ihany koa no nanameloka tanteraka ny herisetran'ny polisy tamin'i  Yüce izay nitranga tamin'ny 5 Oktobra.
Na dia hita fa tsy misy dikany aza izany fepetra izany. Notafihan'ny vahoaka tamin'ny vato sy langilangy ny foiben-toeran'ny vondrona Doğan, ny gazety lohalaharana mivoaka isan'andro Hurriyet ao Istanbul, tamin'ny alin'ny 6 Septambra  sy 8 Septambra , vahoaka izay nokaramain'ny solombavambahoakan'ny AKP sady filohan'ny Tanora AKP, Abdurrahim Boynukalın, izay nanao lahateny fandrahonana ampahibemaso  teo anoloan'ny ny biraon'ny Hurriyet.
Nitohy ny fanafihana ny Doğan Media sy ny mpanao gazetiny raha nodarohan'ny olona miisa efatra  teo anoloan'ny tranony ilay mpanolotra fandaharana malaza Ahmet Hakan Coşkun, izay voalaza fa tapaka ny orony sy ny taolan-tehezany. Taorian'ny famotorana, fantatra fa mpikambana ao amin'ny AKP ny telo tamin'ireo mpanafika. Nilaza avy eo ny AKP fa noroahina tao amin'ny antoko izy ireo.
DİHA no loharanom-baovao be mpitia indrindra eo amin'ny Kiorda monina manerana izao tontolo izao ary maro hafa ihany koa no tsy matoky ny fampahalalam-baovao mahazatra. Efa voasivana indray mandeha ny tranokalany tamin'ny volana Jolay tao anatin'ny fanakatonana faobe  efa notaterin'ny Global Voices teto. Nanomboka tamin'izay fotoana izay, efa nakatona in-20 mahery ny sehatra tahiry sy ny fitaratr'izy ireo.
Tsy mba asa mora mihitsy ny asa fanaovan-gazety ao Torkia hatramin'izay. Fandrahonana, daroka, fampijaliana na koa famonoana mpanao gazety mihitsy no lohahevitra malaza eo amin'ny tantaran'ny haino aman-jery Tiorka .
Mampahatsiahy ireo vanim-potoana maizina tanteraka teo amin'ny tantaran'i Torkia ny fanafihana haino aman-jery sy mpanao gazety ary niteraka tahotra teo amin'ireo gazety tsy miankina sy mpitsikera. Mampiseho ihany koa ny fisamborana ireo mpanao gazetin'ny VICE  sy ny fandroahana an'i Frederike Geerdink  fa tsy ny olom-pirenena Tiorka ihany no iharan'ny fanafihana fa ny fahalalahan-gazety ihany koa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/10/09/75324/
 fanafihana an'i Hakan: http://www.hurriyetdailynews.com/hurriyet-columnist-ahmet-hakan-injured-in-organized-assault.aspx?pageID=238&nID=89212&NewsCatID=509
 herisetran'ny polisy tamin'i : https://bianet.org/english/media/168039-journalist-put-a-gun-against-his-head-by-police-speaks
 nolazain'ny : http://www.diken.com.tr/cnn-turk-programcisi-sirin-payzin-hdplileri-ekrana-cikaramiyoruz/
 6 Septambra: http://www.hurriyetdailynews.com/pro-government-protesters-pelt-daily-hurriyet-building-with-stones.aspx?PageID=238&NID=88080&NewsCatID=509
 nanao lahateny fandrahonana ampahibemaso: http://www.hurriyetdailynews.com/Default.aspx?PageID=428&VideoID=762
 Nilaza : http://www.hurriyetdailynews.com/akp-expels-three-members-implicated-in-attack-on-hurriyet-journalist.aspx?pageID=238&nID=89328&NewsCatID=509
 Nanoratra : http://www.todayszaman.com/national_pro-govt-daily-columnist-kucuk-issues-death-threats-to-critical-journalist-coskun_398649.html
 nosavain'ny polisy : https://bianet.org/english/media/167919-police-raid-against-diha-we-won-t-let-the-truth-be-hidden
 fanakatonana faobe: https://globalvoices.org/2015/08/12/turkish-authorities-on-blocking-binge-as-political-tensions-rise/
 tantaran'ny haino aman-jery Tiorka: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_journalists_killed_in_Turkey
 fisamborana ireo mpanao gazetin'ny VICE: https://news.vice.com/topic/free-rasool